Buy First Copy California Clone in Yangon on ipivi.com
First Copy California Clone
Seller: Kyaw Ko
Views: 155 (+2)
First Copy California Clone
#ဗီယမ်နန်ထုတ် Samsung S8+edge New Memory 64GBအပြည့် Ram 4GB ဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါပြီ$(#၂သိန်းတန်ဖုန်းတွေဈေး၆သောင်းလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ #နှစ်သစ်ကူးလက်ကျန်ဖြတ်အထူးPromotion ၉သောင်း၅ထောင်မှစပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ)
#USA #IPHONE 9️0️0️0️0️True Clone
#လက်ကားဆိုင်ဖြစ်လို့ လက်လီလက်ကားယူမည့်သူများ လက်ကားဈေးဖြင့်ပေးပါတယ်နော်
Wave money 09459258081
ကျေးဇူးပြု့၍ဖုန်းဆက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်......(09459258081)နယ်မြို့များက မှာယူလျှင် ကားဂိတ်အရောက် ပို့ပေးပါတယ်နော်....
#Iphone_X >>>>>>> memoery 128GB. Version 10.0.... ကင်မရာ ရှေ့ 8 နောက် 10 mpl ........ သထ္ထူ body......လက်ဗွေစနစ်ပါ. ကင်မရာ ၂လုံး.. (၁သိန်း၅သောင်းကျပ်)
1️7️0️0️0️0️ ️ယခင် ၂၄၀,၀၀၀ကျပ်
Iphone 8plus >>>>>memoery 128GB. Version 10.0.... ကင်မရာ ရှေ့ 8 နောက် 10 mpl ........ သထ္ထူ body......လက်ဗွေစနစ်ပါ. ကင်မရာ ၂လုံး.. (၁သိန်း၃သာင်းကျပ်)
#Iphone7plus >>>>>>> memoery 128GB. Version 10.0.... ကင်မရာ ရှေ့ 8 နောက် 10 mpl ........ သထ္ထူ body......လက်ဗွေစနစ်ပါ. ကင်မရာ ၂လုံး.. (၁သိန်း၂သောင်းကျပ်)
️ယခင်200000ကျပ် Red .jetblack . gold. Rosegold
#Samsung #S8+ edge>>>> memoery 64GB အပြည့်ပါပါတယ်Version 7.0.... Ram 4GB အပြည့်ပါပါတယ်... ကင်မရာရှေ့ 8mpl... နောက် 16mbl အလူမီနီယမ် သထ္တု ကိုထည်...(၁သိန်း၅သာင်းကျပ်)1️0️ယခင်၂၅၀၀၀၀ကျပ်
#Samsung #S8 >>>> memoery 32.. Version 6.1 ... Ram 3GB... ကင်မရာရှေ့ 8mpl... နောက်12mpl... အလူမီနီယမ် သထ္တု ကိုထည်...(၁သိန်းကျပ်)1️0️ယခင်၂၃၀၀၀၀ကျပ်
#Samsung_Note_8>>>>>memory 32.. Version 6.1 ... Ram 3GB... ကင်မရာရှေ့ 8mpl... နောက်12mpl... အလူမီနီယမ် သထ္တု ကိုထည်...(၁သိန်း၆သောင်းကျပ်)1️0️ယခင်၂၃၀၀၀၀ကျပ်
Iphone7>>>>memoery128 GB. Version 10.0.... Ram 3gb ကင်မရာရှေ့၈ နောက်၁၀ mp .....လက်ဗွေစနစ်ပါ ....သတ္တူ့ကိုထည်...... (၁သိန်းး)ကျပ်။1️0️ယခင်190000
#Iphone 6s plus >> memoery 64 Gb . Ram 3Gb . Version 9.3 . ကင်မရာ ရှေ့ 5mpl . နောက်8 mpl = လက်ဗွေစနစ်ပါ(၉သောင်း)ကျပ်1️0️ယခင်160000
#Iphone 6s >>> memoery 64 Gb . Ram 3Gb . Version 9.3 . ကင်မရာ ရှေ့5mpl . နောက်8 mpl ၈သောင်း၅ထောင်ကျပ် 9️0️ယခင်140000
#SAMSUNG . A8. A9.A7.A5 >>> ၂၀၁၆ memoery 32 Gb . Ram 3Gb . Version 5.1.1 . ကင်မရာ ရှေ့ 5mpl . နောက်8 mpl . Body အလူမီနီယမ်သထ္တူ့ ကိုထည်ပါ=၁သိန်း၂သောင်းကျပ်ပါ။1️20000 ယခင်170000
#Oppo F5 >>memoery 32 Gb . Ram 3Gb . Version 5.1.1 . ကင်မရာ ရှေ့ 5mpl . နောက်8 mpl . Body အလူမီနီယမ်သထ္တူ့ ကိုထည်ပါ=၈သောင်းခွဲကျပ်ပါ
#Vivo 7plus >>memoery 32 Gb . Ram 3Gb . Version 5.1.1 . ကင်မရာ ရှေ့ 5mpl . နောက်8 mpl . Body အလူမီနီယမ်သထ္တူ့ ကိုထည်ပါ=၈သောင်းခွဲကျပ်ပါ
#Samsung J7prime . J8 . J9prime>>>memoery 32 Gb . Ram 3Gb . Version 5.1.1 . ကင်မရာ ရှေ့ 5mpl . နောက်8 mpl . Body အလူမီနီယမ်သထ္တူ့ ကိုထည်ပါ(၈သောင်းခွဲကျပ်ပါ)
Samsung S9plus >>>memoery 32 Gb . Ram 3Gb . Version 5.1.1 . ကင်မရာ ရှေ့ 5mpl . နောက်8 mpl . Body အလူမီနီယမ်သထ္တူ့ ကိုထည်ပါ=၁သိန်း၇သောင်းကျပ်ပါ
#09459258081...#ရန်ကုန်မြို့တွင်း အိမ်အရောက်ငွေချေစနစ်ဝန်ဆောင်မှူ့ဖြင့်ပို့ပေးပါတယ်နော်.... ခုပဲ ၀ယ်ယူလိုက်ပါ..🤗
Name: First Copy California Clone